Philips Hue mababu haachaenderani nemamwe mabhureki | IPhone nhau
Philips Hue mababu haachaenderani nezvimwe zvigadzirwa
Kwenguva yakati ikozvino, masisitimu emwenje akangwara ave akakurumbira, zvichitibvumidza kuti tishandure vara iro raanotipa kubva ku smartphone yedu kuburikidza nechishandiso chinowanikwa muApp Store. Asi zvakare inotibvumidza kuti tichinje kusimba kwechiedza, kuchichinjanisa nemamiriro acho ezvinhu kana kuchibatidza kana kudzima. Mhando iyi yemabhuru yakave yakakurumbira kunyangwe iine mutengo wakakwira chaizvo weizvo chaizvo zvainopa, kunyange zviri pachena kuti inobhadhara kuravira kwemavara.
Iyo Philips Hue fIvo vaive ekutanga mabhuru erudzi urwu kurova pamusika. Nekufamba kwenguva kwave nevazhinji vagadziri vakazvipirawo kuita mhando iyi ye smart bulbs, izvo zvakamanikidza Philips kugadzirisa firmware yemabhuru kuti irege kuenderana neaya anogadzirwa nevamwe vagadziri.
Kusava kwakachipa chaizvo, vashandisi vazhinji vakatonakidzwa naPhilips Hue vakaona nemaoko akazaruka kusvika kwevamwe vagadziri vane mababu ane akafanana mashandiro asi akadhura zvakanyanya asi kushandisa iyo chaiyo yekutaurirana protocol iyo Philips ZigBee inoshandisa.
ZigBee chirongwa chakagadzirwa kuitira kuti madhimoni ese einternet ezvinhu zviri mumba medu vari mukutaurirana vachishandisa mutauro mumwe chete. Parizvino Bosch, Logitech, Samsung, LG, Osram, Comcast ... nevamwe vevagadziri, uko Philips iriko, kunyangwe neichi chiitiko ichi zvinoita sekunge ichamira kushandisa iyi protocol iyo inofambisa kutaurirana pakati pezvishandiso zvakasiyana.
Mugadziri Philips anoti akamanikidzwa kugadzirisa firmware yemabhuru ayo nekuda kwe kuwedzera kwematambudziko ane chekuita neyechitatu-bato zvigadzirwa, iyo yaizovhiringidza vatengi. Neichi chiitiko, iwe haugone kudzora ese asiri-ekugadzira mababu kubva kuHue, kumanikidza ava vechitatu-bato vagadziri kuvhura app nyowani kana kubvuma kuiburitsa pamwe, sezvavakambotora mukana wePhilips app., Nekushandisa mutauro mumwe chete wekutaurirana.
ZVAKAITWA: Philips achangobva kuzivisa kuti icharamba ichibvumira mamwe mabrandi kuti aenderere mberi achishanda naPhilips Hue uye achadzosera software yekuvandudza iyo yatumirwa kumidziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Philips Hue mababu haachaenderani nezvimwe zvigadzirwa
Phillips akangogadziriswa uye achidzokera kumashure.
Pindura ku skell
Apple kushandisa 3D Kubata skrini paPads mushure me iPhone 7